अनौठो संसार Archives - Nuwakot Express
अन्तरिक्षमा कुनै आवाज सुनिँदैन। यसको अर्थ अन्तरिक्ष शून्य छ। ब्रम्हाण्डको कुनै छेउ छैन। त्यसैले अन्तरिक्षको एक ठाउँबाट अर्कोतिर सीधा हिँड्यो भने पनि अत्यमा पहिलेकै ठाउँमा पुगिन्छ। यो खबर आजको नयाँ पत्रिका दैनिकले छापेको छ। ब्रम्हाण्डमा प्रतिदिन दुई सय ७५ नयाँ तारा उत्पन्न हुन्छन्। हाम्रो ९० प्रतिशत शरीर ताराको तत्वबाट निर्माण हुन्छ। यदि एक मिनेटमा सयको…
विश्वभर फ्रि वाईफाई ! झण्डै ५ हजार करोड रुपैयाँ बराबरको रकम लगानी गर्ने
एजेन्सी । एक चीनीयाँ कम्पनीले अन्तरीक्षमा आफ्नो स्याटेलाइट प्रक्षेपण गर्दैछ । विश्वभर नै निःशुल्क वाईफाई सेवा उपलब्ध गराउने लक्ष्य लिएको यो प्रोजेक्ट सफल भएमा सन् २०२० बाट विश्वका सबै मानिसले स्याटेलाइटको माध्यमबाट सीधै हाई स्पीड वाईफाई इन्टरनेट प्राप्त गर्नेछन् । कम्पनीले बताएअनुसार आउने वर्ष चीनको गाँसु प्रान्तस्थित जिउकुआङ प्रक्षेपण केन्द्रबाट उक्त स्याटेलाइट लञ्च गरिनेछ । यस योजनालाई…
यसरी अवतरण गर्‍यो मंगल ग्रहमा नासाको अन्तरिक्षयान (हेर्नुस भिडियो)
काठमाडौं : मंगल ग्रहबारे विस्तृत अध्ययन गर्न नासाले पठाएको रोबोट मंगलबार बिहान मंगल ग्रहको सतहमा उत्रिएको छ। मंगलको विस्तृत अध्ययन गर्न नासाले करिब सात महिनाअघि मेमा रोबोट पठाएको थियो। ४५.८ करोड किलोमिटर दूरी पार गरेर रोबोट मंगल ग्रहको सतहमा उत्रिएको हो। रोबोट मंगल ग्रहको भूमध्य रेखा नजिकैको एलिसियम प्लानिसिया नामक एक फराकिलो मैदानमा उत्रिएको छ।…
मंसिर ३, २०७५ - सोमवार
बेइजिङ : चीनका वैज्ञानिकले स्वच्छ ऊर्जा पैदा गर्ने उद्धेश्यका साथ एक कृत्रिम सूर्य बनाउने तयारी गरेको छ। यो खास सूर्य भन्दा ६ गुणा धेरै तातो हुनेछ । जहाँ खास सूर्यको गर्भ करिब १.५० करोड डिग्री सेल्सियससम्म तातो हुन्छ भने चीनको यो नयाँ सूर्य १० करोड डिग्री सेल्सियससम्म तातो पैदा गर्न सक्नेछ । चीनको एकेडमी अफ…
चीनमा सय वर्ष पुरानो घर यसरी सर्लक्कै सारियो (भिडियो)
जेष्ठ २२, २०७५ - मङ्लबार
काठमाडौँ: नेपालमा पुरातात्विक सम्पदाहरु तोडफोड गरेर भत्काइरहँदा चीनमा एक सय वर्ष पुरानो एउटा घर सर्लक्कै सारिएको छ। करिब एक सय वर्ष पुरानो घरलाई नभत्काइ अर्को स्थानमा सारिएको हो । यस भवनलाई केबल ५४ मिटर पर सारिएन मात्रै ९० डिग्रीसमेत घुमाइयो । यो घर सारिएको भिडियो सघाई कन्स्ट्रक्सन ग्रुपले यु-ट्यूबमा सार्वजनिक गरेको छ । जहाँ ट्रली र…
चीनले अनावरण गर्‍यो २० अर्ब डलरको विश्वको सबैभन्दा लामो समुद्री पुल(फोटो फिचर)
बैशाख २६, २०७५ - बुधबार
हामी रिपोर्टरहरूले डरलाग्दो गरी उजाड हङ्कङ–झुहाई–मकाउ पुलमा गाडी चलाइरहँदा पर्ल रिभर डेल्टाको पानी आँखाले भ्याएसम्म टाढासम्म फैलिएको देख्यौँ । दृश्यमा जमिन कतै देखिँदैन थियो । ५५ किमि लामो यो पुल समुद्रमाथि बनेको विश्वको सबैभन्दा लामो पुल हो । हङ्कङ–झुहाई–मकाउ पुलको सहयाक निर्देशक र वरिष्ठ इन्जिनियर गुओ जिङलिनले हामीलाई आधा बाटोमा भेटे । हामीले बलियो बतासको…
कस्तो अचम्म नयाँ वषको दिन मात्र फूल्ने फूल !
बैशाख १, २०७५ - शनिबार
महेन्द्रनगर । पूर्व–पश्चिम राजमार्गअन्तर्गत सिरहाको पडारिया चोकदेखि दक्षिणमा रहेको ऐतिहासिक तथा प्राचीन फूलबारी जहाँ नयाँ वर्ष वैशाख १ गते मात्र फुल्ने फूल देख्न पाइन्छ । ‘सल्हेस’ फूलबारी ‘हारमको’ रुखमा एकाबिहानै सुनाखरी आकारको फूल फुल्छ र साँझ ओइलाएर जान्छ । सो रुखको फूलबारीको मध्यभागमा रहेको राजा सलहेसको गहबर मन्दिर संँगै टाँसिएको सो रुखको फूल आजसम्म रहस्यमय…
चैत २१ – बाघको पञ्जाबाट फुत्केर आएकी एक युवती घरमा छिर्नेबित्तिकै के गरिन् होला ? बाघको आक्रमणबाट गम्भीर घाइते भएकी ती युवतीको शरीर रगताम्मे थियो । तर उनले घरभित्र छिर्नेबित्तिकै आफ्नो मोबाइल निकालेर आफू र आफ्नी आमाको सेल्फी लिइन् । उनीहरु घरभित्र भए पनि बाघ बाहिर नै थियो । सुरक्षाको कुनै ग्यारेन्टी थिएन । त्यसैले…
श्रीमतीसँग सम्बन्ध नटुटोस भनेर यस्तो गज्जबको आइडिया !
चैत्र २०, २०७४ - मङ्लबार
चीनमा सेक्स डल राख्ने संस्कृति बढेको छ । काम वा कुनै कारणले श्रीमतीसँग छुट्टिएर एक्लै बस्ने युवाहरुले आफ्नो बेडरूममा सेक्स डल राख्न थालेका छन् । कयौं मानिसहरु यस्ता पनि छन् जो आफ्नो पत्नीसँग टाढा बन्छन् तर आफ्नो कारण श्रीमतीसँग बिछोड नहोस् भन्ने चाहन्छन् । यस्तो अवस्थामा उनीहरुले परस्त्रीसँगको आकांक्षा नहोस् भन्ने हेतुले सेक्स डलसँग आफ्नो…
महिलालाई उत्तेजित पार्न यस्ता व्यवहार गर्नुहोस्
चैत्र १२, २०७४ - सोमवार
यौनपार्टनरबीच समझदारी नभई गरिएको सम्भोग सुखमय नहुने र खल्लो हुने हुँदा महिलाको सक्रिय सहभागिता पुरुषको पहिलो रोजाइ हुन्छ । अमेरिकी विश्वविद्यायलयले गरेको अनुसन्धान अनुसार महिलालाई सम्भोगको बेला उत्तेजित पार्न पुरुषका केही व्यवहार आवश्यक रहेको बताएको छ । राम्रो सम्वाद गर्ने यौन पार्टनरसँग उसको वा आफ्नो मनपर्ने सेक्शुअल इच्छाका बारेमा कुरा गर्ने भन्न खोजेको प्रश्न इशारा…
चैत्र ८, २०७४ - बिहिबार
यौन सम्बन्ध पुरुष र महिलाबीचको प्राकृतिक आकर्षणको मुख्य कारण हो । तर यौन सम्बन्ध राख्दा महिला र पुरुषको मनमा कस्तो भाव आउँछ भन्ने विषयमा सबैलाई कौतुहलता हुन्छ । यस विषयमा धेरै अध्यन भएका छन् भने लेख रचना समेत लेखिएका छन् । पछिल्लो पटक गरिएको एक शोधले महिलाले ओच्छ्यानमा के चाहन्छन् भन्ने विषयमा नयाँ तथ्य बाहिर…
सोनिका रोकाया, युट्युबर तथा मोडल- हिजोआज प्रेमसम्बन्ध हुनेहरूले पनि बेग्लै यौन साथी बनाएका हुन्छन् । खासगरी डिभोर्सको कारण पनि त्यही हो जस्तो लाग्छ । मानिसहरूले जब यौनसम्बन्धमा नयाँ फ्लेबर खोज्न थाले, त्यसपछि घर भाँडिने घटनाहरू बढ्न थाले, तर स्वस्थ यौन व्यवहारले स्वास्थ्यलाई फाइदै हुन्छ । अहिलेको पुस्ताले प्रेम गर्दा यौनको स्वाद पनि सँगै लिइरहेको हुन्छ । म लेखेरै दिन्छु,…
महिनावारी भएको बेला यौन सम्बन्ध राख्नु हुन्छ कि हुँदैन ?
विस्तारामा पल्टिनेबितिक्कै म आफूलाई सुख र सन्तुष्टिको श्वास फेरिरहेकी पाउँछु । यो सुख र सन्तुष्टि मैले केटा साथी (ब्वाईफ्रेन्ड)सँगको राम्रो यौन सम्बन्धका कारण प्राप्त गरेकी हुँ। म ब्वाईफ्रेन्डको धेरै नजिक भएको पाउँछु। ऊसँग मेरो एक अनौठो बन्धन छ, जुन छुट्नै सक्दैन। ऊसँग हुनुको जुन सन्तुष्टि छ, त्यो म स्पष्टसँग महसुस गर्न सक्छु। ऊसँगका हरेक पल…
धादिङमा बाख्राले मान्छेजस्तै पाठो पाएपछि … (तस्बिरहरु)
धादिङ, २ चैत । जिल्लाको उत्तरी क्षेत्र रुबीभ्याली गाउँपालिकाको लापामा बाख्राले मान्छेजस्तै पाठो जन्माएको छ । स्थानीय कृषकले पालेको बाख्राले चार खुट्टासहित मान्छेजस्तै देखिने पाठो जन्माएको हो । जिउँदै जन्मेको उक्त पाठो केही समयपछि मरेको थियो । मरेको पाठो हेर्न स्थानीयको भिड लागेको स्थानीय सुमन घलेले जानकारी दिए । बाख्राको पाठोको चार खुट्टा र शरीरभरी…
के तपाईँ लामो समय यौनसम्पर्क राख्न चाहनुहुन्छ ? यदी त्यसो हो भने यसो गर्नुस्
फाल्गुन २६, २०७४ - शनिबार
मेरो विवाह भएको दुई वर्ष भयो । म दुई–चार मिनेटभन्दा बढी यौनसम्पर्क गर्न सक्दिनँ । मेरी श्रीमती मबाट सन्तुष्ट छैनन् । लामो समयसम्म यौनसम्पर्क राख्न के गर्नुपर्ला ? यौन उत्तेजनामा आउने र विभिन्न चरणमा अघि बढ्दै जाने कुरा कतिपय बाह्य तथा आन्तरिक कुराहरूमा भर पर्छ ।पुरुषले योनिमा लिङ्ग प्रवेश गराएदेखि वीर्यस्खलनसम्मको समयलाई Intravaginal Ejaculation Latency…